Etiquette | WordPress.org Malagasy
Ny fandraisana anjara amin'ny tetikasa open source WordPress no ahatsapantsika fa ny tena heriny ananantsika dia ny fianakaviamben'ny mpampiasa WordPress omentsika vahana. Ny tetikasa manontolo dia manaraka ny lalan-tsaina philosophique-n'ny The Cathedral and The Bazaar.
Natao ho tombotsoa iombonan'ny fianakaviambe WordPress manontolo mihitsy ny fandraisana anjara amin'ny tetikasa Open Source WordPress, fa tsy natao ho ana orinasa na vondron'olona manokana. Ny fandraisana anjara rehetra dia tokony hitsinjo ny tombontsoa ambonin'ny besinimaro.
Misokatra ho an'ny rehetra ny fandraisana anjara amin'ny tetikasa open source WordPress, ary tsy anavahana fahaiza-manao, saranga na maso-tsivana hafa.
Miankina amin'ireo mpandray anjara an-tsitrapo ny fampandehanana ny tetikasa open source WordPress. Na dia misy orinasa mpanohana aza ny mpandray anjara iray, dia voka-tsoa ho an'ny fianakaviamben'ny open source ny fandraisana anjarany.
Ny tsirairay dia afaka manolotra fotoana sy mandray anjara amin'ireo tetikasa, mety ho amin'ny alalan'ny fanatsarana ny endriny, ny fanamboarana ny kaody, ny fanoratana ireo tahirin-kevitra, mampiroborobo ireo fandraisana anjara, ... Raha mila fanazavana fanampiny, jereo ao amin'ny make.wordpress.org.
Ao amin'ny Slack #community-team no mivory, ary zaraina ao amin'ny Blaogin'ny Make Community ny tatitry ny fivoriana.